In bulshada Shaydaanku | Cosmos koobi karayn
Posted in xoog . lacag . Matrix . baraaruga . Satanism . wax aan waxba tarayn . ilbaxnimada
On meeraha dhimashada kooxaha argagixisada midaysan yihiin dagaal qarsoodi ah la dadweynaha. In this, waa mararka qaarkood lagama maarmaan ah in caalamka laga argagixisada oo lacag la'aan ah, kan qudhiisu maamulka Hababka, iyo dadka macquul ah wac khatar ku tahay hodmin dhac iyo sahlan-la aqbali karo. Xitaa by ay been ah “sharciyada” waxay la xisaabtan la'aanta xad articles iyaga u gaar ah ee Xeerka Dambiyada (Qodobka. 206, 209-210 UKRF, Qodobka. 13, 17-19, 285-295 UKRB, 147, 255-270 UCU iyo Qodobka ku haboon. UKSŞA, Sharciga Dambiyada UK iyo dalalka kale). Faahfaahinta eegi doonaa sida: 1. Diyaargareeya ee dembiga, qorshe ah uga hornimaadno halligaadda la'ahay dadweynaha. 2. Abuur urur baandooyinka si ay u cabsiiyaan dadka a. 3. Hawlan denbiyada abaabulan, waayo, kobcinta shakhsiga. 4. Falal argagixiso si loo baabi'iyo dadka Damac ay shuqul qaban (dhagax biyo joojiyo: “aad boos, aynu hore u qabsadeen”). 5. Magacaabidda xubnaha ka ah Xaakinka baandooyinka ah. 6. Joogto galaan falimihiisii ​​kayihiin mass dhex channels iyaga u gaar ah. dhagax biyo joojiyo: “jiraan wax garan mayno: Anigu garan maayo, oo aanad garanayn, oo annagu ogayn karo (maxaa yeelay, waxaan u baahan nahay), in ka dibna si fiican u ahaa. Haddaba Boqorow, anigu waxaan ahay (ama boqorka ee Iina), oo waxaad tihiin addoommadayda. All oo naga mid ah dhab ah: oo aniga iyo adiga – laakiin waa in aan. Waxaan dhamaanteen ku xanuunsado.” (In taiga fiid aamusnaan bilaabmaa). 7. Qarinta macluumaad ah iyo qabashada la haystayaal mugdi ah. 8. fursado xakamaynta, Jidadka iyo hababka macluumaadka loo helo. 9. Dhammaan noocyada kala duwan iyo tirtiridda dhamaystiran warbaahinta.
Si aad u, Si aad wax badan ka baran tirada dambiyada waa ku filan si ay u bartaan code dembiyada ee gobol kasta iyo dembiilaha marka hore noqon lahaa gobolka aad, leh code ka. Maxaa yeelay, halkaasaa jebin shay kasta.
Nolosha bulshada “farcankaaga Shaydaanku”, marka hore si uu u daawado oo la yaabanahay sida kuwan noolaha noolaha kala hadlayso dhabarka kasta oo kale oo joogto ah hoos kuwa kale oo dhan in ay falalka la mid ah. Iyo fursad ay ku wada hadlaan gebi doqon iyo loo baahan yahay oo kaliya in ay, si ay u kiciyaan xowli ah nacayb. Noolaha aan ahayn nugul moral iyo mid baaba'aysa oo dhan askance eegto: “Sidee? Waa maxay sababta ma uu doonayaa in aan noqdo qeexnayn giblets?”
Barashada dugsiyada si cad u arki karaan sida ugu camal xumaanta “farcankaaga Shaydaanku” xirrira isla damaca kale oo dhan. Waxa ugu yaab leh, in inta kale ee this farxeen oo si farxad Hawiyaha ee wasakhda. Laakiinse dib suuroowdo, Dad tiro yar dib u heli kartaa. Markaas yimaado halligaad systemic oo dhan u shaqeeyo lacag iman kara. By da'diisu ka yaraan afartan, marka waa farcankii in ay nolosha ku dhadhamiyaan duwan – qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waa ku filan. Laakiin ilaa dhibic this Lab ma qabaa oo ka mid ah xubnaha taranka iyo xubnaha taranka oo keliya 10 sano ee nolosha (la 1 si ay u 11 sano) sababtoo ah dhadig,, Waxaan nahay in ay jiraan xaalado kala duwan oo hoos vozvrastnyh ah, aragnimo nolosha kala duwan ee mas'uuliyadda, Waxay door bidaan in ay muujiyaan xubnaha taranka iyaga u gaar ah iyo xubnaha taranka si ay u xukumid soo gunaanadeen lab. Malaha xataa kow iyo toban sannadood haweenka dhalinyarada ay awoodaan in la beddelo soo gunaanadeen ee labka. Laakiin teprimosti leenahay intooda laboodka waa ku filan tahay oo kaliya oo kow iyo tobanka sano ee ugu horeysa ee uu noloshiisa.
Haddii meel ku kooban wada jir ah ula noolaha noolaha caafimaad waa, kuwa buka cretinism – ma noolaha caafimaad bilaabaan inay qabsadaan iyo shaqo ee dhulka laga heli karaa, si aad u hesho faa'ido ballan qaaday in arrinta ay badbaado u gaar ah. Tani waxay keenaysaa in burburinta nidaamka kaliya degaanka ku hareereysan aan, laakiin sidoo kale in burburinta dedejiyey oo ka mid ah hawlaha muhiimka ah ee xoolo caafimaad qaba. Markii ay reernimo territory qabtay baaba'aan dadka oo dhan, keeno lacagta macquul ah – waxaa jira dhamaystiran is burburinta ee noocyada muhiim ah. su'aasha: “Maxaad badnayn oo u maareeyaan si uu u qabto xoog?” – habka ugu fudud in ay ka jawaabaan tusaale. Ma jidh caafimaad leh markii uu ku shubay “dhoobo dareen”, iyo splatter “candhuufta habdhiska” afka? haddii – no, halganka awoodda shakhsiyaad caafimaad lumin.
dabeecad u gaar ah “badnayn darro” siyaasadda sabab u yeedhay qaar ka mid ah, inkastoo la siyaasadda waxa ay leedahay yar ee caadiga ah. Qabsashada, qaar ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah ay soo saaraan qaab la qorsheeyey. Chesche ay dhan ciyaari neslyshane ama ismaandhaaf, laakiin mar walba isa soo taagaan sidii, aad leedahay si aad u sharaxdo oo dhan isaga qudhiisu, hagaajin, si ay u fahmaan iyo inay sameeyaan oo kaliya waxa, in ay diyaar u yihiin inay maqlaan yihiin iyo waxa ay ku mashquulsan yihiin oo aan wax badan oo kale, aad iyo gool, in muddo ah, sugaan, maxaa yeelay,, ma laga saaray, in “nerd deranged” ogeysiis skultivirovannoe maskaxda aad caabuddaan slavish iyo dan kaama ay! Sidaas darteed of this khiyaano nidaamsan baaba'aan nolosha waxtar leh…
Inta badan, “cretinism waalan” Waa in la qabto awood u isticmaali, marka wax ciidammadu xoogga waxtar leh tayo iyo ma aan samayn karo, iyo wax qabad la'aanta ay lumiyaan “shekeysan utility” ciidamada dhaqmaan, oo dhan, laakiin isaga dareento doqonimo, iyo niyada ka mid ah sababaha talisyo aamusan wax yar ka hor “ohamevshey upstart”.
Haddii aad u maamulaan si aad u hesho at asturidda jidhkiisii, oo u dhiganta maskaxdaada iyo hanad – u badan tahay waxay ka dhigi doonaa cuncun in kuwa, kuwaas oo maamuli doona “si aad u hesho dhow si aad u”. Iyadoo ku xiran xaaladaha, waxa ay keeni kartaa dillaaca cadaawad ka waalidiinta iyo qaraabada. xaaladda, waaweyn, Waxa ay gaari karaan khiyaanay. sida caadiga ah, dhacdo, haddii aragtidaada ma u dhigma fiiriyaan qaraabadaada ah, kuwa xaqa rumeeyow, waxay xaq u leedahay in la xakameeyo nolosha. Khiyaamooyinka iibsan kartaa noocyo kala duwan oo noocyo, iyo, sida caadiga ah, loogu talagalay burburinta meel degan idiin ah nolosha. Haddii guul, wax-gaadhista waa nolosha dambe wax aan waxba tarayn. TK. qiimaha aan dabiici ahayn ma awoodaan inay badalo gool run.
Nasiib darro ma khiyaano afjaro ma aha oo kaliya on qaraabada. marka “baalasheeda farxad” iyo guud ahaan fayo-qabka ah dillaac warbixin aad waxtar leh loo ogolaan doonaa – aad noqon doonto awood u la yaabay in saaxiibadaa iyo sidoo Naasixa inuu ka soo leexdo galay cadaawayaashiinna, qallafsan oo ilqabad leh Ucronia jawaabta. malaha, Planet feature of Death waa in ay isku dayaan in ay wada baabbi'in dhammaan qaybaha waxtar leh aawadiis farxaddaada soo Dagdagaysa sinaba suurto gal. Qaar ka mid ah u samayn out of masayrka, kuwa kale sababta oo ah waxay doonayaan waa faa'iido, saddexaad ee la doonayay la waayo, xoog aan xaq kasta iyo sababaha. Laakiinse aakhirkeedu wuxuu halkaas waa u baabba 'dhamaystiran oo nolosha. Cosmos noqonin Khaa'in u xukumay eryidda kama dambaysta ah.
Khiyaamooyinka dhici karaa sabab u qiiro, xitaa waalidka. Marka farcankii tagaan qaangaarnimada qayb ahaan ama gebi. Waxaa cad in laabaha dumar qabanayaa vseobladanie “izvergnutыm” shay. Iyo kicitaanka masayrka dhici kara ku dhowaad aan sabab lahayn, xitaa haddii ay inta badan wax aan macquul aheyn waa in la xakameeyo dhammaan macluumaadka ku saabsan dhaqdhaqaaqa dhallinyarada.
uun tayo on Geeri meeraha filan oo keliya ma ay ceeboobi sababtoo ah khiyaamooyinkii, laakiin sidoo kale xaasidnimo ku xeeran, kaas oo noqon doona oo faro badan si ay u la socon iyada oo nolosha. Tan waxa u sabab xaqiiqda ah, upstart in kiis kasta ha ku talo jiraan in ay wadaagaan leh tayada filaan ah qabtay awoodda. Maxaa yeelay, technology tayo yaabiyo, iyo ciddii maskaxda gashata ee xoog dhamaadka iyada khasaaro. Show ciyaaray Maps laakiin waaxda awoodda, tayo leh iyo xariif filan cadaadis iyo dhibbanaha adeegyada gaarka ah iyo si ciriiri ah spitsializirovannyh “wareegyada Satanists”. Iyadoo caadiga ah “Gooryaanka cudurkii” , ma aha kuwo wax noqonee awoodi, hanad no, si fudud u hinaasi doonaa oo, suurto gal, ilko caddayn ballaaran ee wada hadalka. Maxaa yeelay, hanad – waa awood u leh inay ka heli waxyaalo waaweyn ee muuqata. Oo dhan, kan stanovistsya technology cusub loo yaqaan oo la heli karo, Waxa uu bilaabo inuu u muuqdaan sida haddii ay, sidoo kale, la mid ah sameeyo karin ama samayn furitaanka isla, ama qof kasta oo si fiican u samayn kartaa. qaar ka mid ah, xataa, sababta oo ah nesderzhennosti iyaga u gaar ah qaylin karo: “Brother, sida aan aniga qudhaydu waxaan awoodo dogodalsya!?” Ka dib oo dhan,, oo dhan cajiib ah – kaliya.
Xitaa haddii aadan hanad a, kaliya dhashay qurux badan ama u qurux badan – sugnaaday qaddar la mid ah. Sidaa darteed, mid keliya muuqaalkaaga dhigi doonaa xaasidnimo iyo gardarada. Waayo, noolaha daciif isag oo og fahmaan, in height ma aha gaari iyaga u. Oo xataa haddii qurux badan “shaqeeyo” dhillo u noqotay lacag la'aan ah, si qof walba awoodo “quruxda fuck” – uu, si kastaba, nacayaa, maxaa yeelay, “kursiga dhibaato” qarinaya meel kale. sida muuqata, Waxaas oo dhan waxaa sabab u ah, qaab qurux badan – waa in shahaado qaar ka mid ah hanad a. runta, had iyo jeer ma ay taageerto istaahilaan “ragga”. si kastaba ha ahaatee, Ma aan istaahilo waxa milkiilayaasha iyo qurux, ma foomamka kaliya mari waa in “daaweynta caadiga ah fayoqabka”.
qurux badan “Dheddigga iyo Laboodka” Life waxaa ku weheliyay dillaacay nidaamsan nacayb. Laakiin la tuuraa nijaasta ahaa, kuwaas oo waa in aan illoobin, in ammaan ugu wanaagsan ee aad quruxduna waa cay aan idmaneeyn haweenka, iyo ma aha oo kaliya ka soo cudurka “cudurka eyda”. Nacayb iyo xaasidnimo on Geeri caalamka waxaa ay marwalba isku dayayaan “socdo” la Beauty.
Space ayaa had iyo jeer la neceb yahay ee dunida genienenavistnikov.
The tuugsanaya nafta dhaddig, ma aha oo kaliya sirdoonka baskervilskoy, Waxay door bidaan in falanqaynaya adduunka oo dhan marka laga reebo sida, sida milkiilayaasha ganacsiga saliidda. Oo ka dib markii barnaamijka wadnay oo dhan ka heli doontaa guri aad bioform – waxay aad ka heli karto galay slurry madow ka ceel ay u. hubaal, waa xusuusin, dhaqan “dhadig” Waxaad ku rakiban kartaa, in ay ragga neceb.
“dhadig” this “dhagaxayga weyn funky” kaliya isku day inaad wax kasta oo aad naftaada qaado “li'I dagaal” sida lamaane ah weheshiga. haddii “xisbiga gubay”, ka dibna isku day soo socda ka qayb qaadan doonaan nacas. Haddii ay dhacdo in failure qaadataa wax meel amorphous laakiin gacanta. The dhumiyaan ugu wanaagsan, in aan cidna u tegey, oo wuxuu degay waxtarla'aan. (Balanqaad uga taxaddaraan iyo qabaa dheeraad ah naftooda iyo nooc ah oo ku saabsan.) nolosha qalloociyeen, marayay meel u dhow – ah, waxaa lagu khasbaa in ay daawadaan ugu kartida badan. Faracoodii dunida overpopulated A “dheddigga carrab la '” tarmaa xumaan. Waayo, kaasu waa soo jireenka ah ee ay DNA. Sababo la tixraacayo ee hidde ah “dheddigga hews dameer eey cadhooday”. Laakiin haddii dadaalka la doonayo iyo hoose, xataa waxay si weyn u hagaajin karaa xaaladda u gaarka ah. Ma loo baahan yahay in ay oggolaadaan in ay mawjadaha hooseeyo in ay nuugaan. Oo wax kasta oo ay leedahay in la diiradda si ay u ilaaliyaan oo u horumariyaan hanad. Dabcan, samayn habka ugu fudud waxaa, halkaas oo ay horey u leedahay, marka taageerada cajiib ah oo tayo leh sida ugu macquulsan. On meeraha caadi ah oo ka dhigi: ugu rajo yihiin tirada ugu badan ee xorriyadda iyo fursadaha, in la keeno lacagta ugu badan. Laakiin peculiarity ee xaaladda ay tahay mid, in haddii talooyinka aan la raacin – waxyaabaha haleysan yahay wuxuu noqon doonaa mawduuca si Hijrooday ee caadiga ah.
tartanka ba'ay, xaalufinta in ay kala duwanaanta, Waxay ku waayi awood u leh inay tayada waxqabadka maskaxda, oo waxay bilaabayaan ee digsiyada napoiminat dhakada. By dejinta resonance la vibrations la mid ah ay bilaabaan in ay dhegeystaan ​​music isla nooca, taas oo lagu garan karo sida “music Pot”. saamayn Mass waxay abuurtaa sawir aad u caajis…
· 0 • ◪◩ Tattoo - iyagu ma ay qabsadaan ◪◩ • 0 ·
ballaarinta baaxad weyn of Death on meeraha in Jannada muuqan kara oo kaliya “organisms halkii qashin”, in lacagta wax xaaladda haleysan. Sida caadiga ah waa farcankii khadadka generic rajo eego Order giirte. Oo mar ay ku jiraan hore oo dhan wakiilada tartanka ba'ay a – hubaal, ay sax noqon lahayd in ay soo wac “geeks”. Oo haddii aanay ahayn – tijaabi.
Celebrity iyo ammaan ee Caalamka shayddaanka isku dayo in la doorto “jiir oo lagu dayan karo”, kooban. Haddii kale khatar ku-dhismeedka.
The lammaanaha ugu badan ee galmada – 30 sano “lab” iyo 18 sano “samke”. urur noocan oo kale ah waa iska caadi ah “Harmony wadnay”. laakiin halkan, haddii aan iska indha 10 sano – guulaystaan, in “lab” 20 sano, iyo “samke” oo keliya 8. Ma xaaladahan mamnucaya pedophilia? Laakiin marar badan waxaa “ururada” 50/18 – in xitaa caddayn laga yaabaa in soo gunaanadeen ugu xasiloon: malaha, waa nooc ka mid ah qasnaan. Laakiin haddii aad ka boodo xitaa ka sii badan caalamka – naf gudbay, taas oo ku saabsan 30 000 sano sameysmi karaa isbahaysi la Naftooda cusub. Oo halkan waxa uu noqonayaa mid guud ahaan adag tahay in la ogaado leexashooyinkaasi qaabka. Waa hagaag, haddii aad weli ku dar caanaha iyo nidaam reincarnation – kuwaas oo dhanna waxay xiriir galmo waa mid aad u badan sida ciyaar ah “kooxda camomile” kordhiyay wakhtiga. run ahaantii, fiicnaan, in siiyey Cosmos, in caalamka this waa aawadood oo ah is-ku qanacsan tahay kuwa Baadida qaar ka mid ah? Ka dib markii dambi etozhe aad u daran. iyaga oo dhan soo diri kartaa daaweynta?
Dhamaadka unugyada qoyska haleysan, kuwaas oo loo yaqaan “guurka”, carruurta ku dhasha, taas oo “nidaamka” bixisaa tixgeliyo haleysan, malaha, Sidaa darteed, in qoyska la soo gabagabeeyey ah baxda dareen qabin ceebownaaye u ah nolosha qoyska ee shakhsiyaadka, in marka laga reebo “guursaday” oo aan lagu magacaabin. Kuwani kids saboolka ah, in si khaldan loo fahmay: sababta ay halkan waa “nuugo” – Robert Hartung, oo joogto ah safka play “sanduuq”, si aadan fahmin wax.
♡ ★ ♥ Mashiinka Time The – la qabadsiiyay ♡ ★ ♥
PS. weeraryahanka: meel.